It is me. Ko Niknayman.: မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။ (နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၀ရခုနှစ်)။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။ (နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၀ရခုနှစ်)။
Posted by Ko Niknayman at 12:08 PM